Nkuzi nke Android site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporo (Peeji nke 5)
Naanị 10% antivirus na gam akporo na-achọpụta ngwa niile dị njọ
Chọpụta karịa gbasara ọmụmụ ihe a na gam akporo nke a chọpụtaworo ọnụọgụ nchọpụta nke antivirus kachasị ama na ahịa.
Budata onye na-ebido ihe ndozi Black, ihe nkwụnye ọkụ dị nfe maka naanị 24 awa
Budata ihe ndozi Black n'efu, ihe kachasị mfe, dị mfe ma na-arụ ọrụ site na Playlọ Ahịa Google Play ugbu a n'efu maka obere oge.
Kedu otu incognito mode si arụ ọrụ na Google Chrome
Chọpụta karịa maka otu ụdị ihe nchọgharị a na-arụ na android. Chọpụta ihe niile banyere ọnọdụ a na Google Chrome.
Gam akporo nchedo: Ihe niile banyere ikikere ngwa, inye ma obu inye?
Anyị na-ekwu maka nchekwa gam akporo gbasara ikikere ngwa yana mgbe ị ga-enye ha ma ọ bụ na iji atụ atụ bara uru yana ngwa abụọ ịchọrọ ịhapụ.
Etu esi zoo foto na vidiyo na profaịlụ gị na Instagram ebe ha na-akpado gị
Chọta karịa gbasara ụzọ anyị nwere ike isi zoo foto na vidiyo nke akpọrọ anyị na Instagram na profaịlụ.
Etu esi ogbi amamọkwa ozi ozugbo na Instagram
Chọpụta karịa banyere usoro anyị ga-eso iji kwụsị ịgbachi ozi ozi na Instagram.
Etu esi amata ma ngwa ndị dị na APK dị adị
Chọpụta otu anyị nwere ike isi mara ma ngwa dị n'ụdị APK bụ ụgha ma nwee ike iyi egwu na ekwentị gam akporo anyị.
All na ihuenyo oghere na akwụkwọ ahụ aja nke Galaxy S10 na S10 +
Anyị na-etinye akwụkwọ ahụaja niile na-atọ ọchị maka Galaxy S10 nke na-elekwasị anya na oghere ndị dị na ihuenyo ahụ na-enye ohere nnukwu okike.
Etu esi edobe ozi ịntanetị na atụmatụ “Smart Compose” ọhụrụ na Gmail
Ide ederede bu otu n’ime ihe omuma ohuru nke onye ahia email Gmail nke ị nwere ike ide ozi email ngwa ngwa na mkpanaka gi.
Etu ị ga - esi nweta igodo Bixby na Google Assistant na Samsung Galaxy gị na Tasker
Tasker emelitere na beta ka ị nwee ike ịtọọ bọtịnụ Bixby wee si otú a malite Google Assistant. Otu n'ime omume ndị kachasị eme.
Ngwọta: Huawei Igwefoto na-edekọ vidiyo HD, Smart Shot, Ndenye ngwa ngwa na usoro aghụghọ maka Huawei
M na-ahapụrụ gị ụfọdụ ndụmọdụ na-atọ ụtọ na ngwọta maka nsogbu nke enweghị ike ịgbanwe ogo ndekọ nke ngwa igwefoto Huawei.
Ọ dị njọ n’ezie inwe ekwentị gam akporo gị mgbe niile?
Chọpụta ihe banyere ihe ndị nwere gị gam akporo ekwentị mgbe niile bụ ihe ọjọọ maka ya. Ha bụ eziokwu ka ọ bụ naanị akụkọ ifo?
Kedu otu Google Play nyere aka melite nchebe nke otu nde ngwa
Chọpụta karịa usoro Google Play mere iji nyere aka melite nchekwa nke ihe karịrị otu nde ngwa.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ọkà okwu ekwentị gị gam akporo na - arụ ọrụ
Chọpụta ụfọdụ ihe ngwọta maka ọdịda na-emekarị na ọkà okwu nke ekwentị gam akporo gị nke na-akwụsị ọrụ mgbe ụfọdụ.
Esi gbanyụọ ebe ndabere Facebook
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji gbanye ọnọdụ ahụ na ndabere nke Facebook nke na - egbochi ha ịhụ ọnọdụ ahụ ma ọ bụrụ na anyị anaghị eji ngwa ahụ.
Etu ị ga - esi hazi igodo Bixby iji mepee Google Assistant mgbe Samsung agaghị ekwe gị
Ọ bụ ezie na Samsung na-enye ohere ịmalite ngwa ọ bụla na igodo Bixby, ọ na-ewepu Google Assistant. Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi chekwaa ụdị
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ntụgharị ekwentị gam akporo anaghị arụ ọrụ
Chọpụta ihe ngwọta ndị a ị ga - agbaso mgbe ntụgharị akpaghị aka anaghị arụ ọrụ na ekwentị gam akporo anyị ma mee ka ọ rụọ ọrụ ọzọ.
Etu ị ga-esi weghachite ozi ehichapụ na gam akporo
Chọpụta ihe banyere otu esi enwe ike ịnweta ndekọ ngosi na android na usoro ma ọ bụ jiri ngwa maka ya.
Gaghịzi achọ icheta okwuntughe gị na gam akporo
N'ihi asambodo FIDO ọhụrụ enwetara site na sistemụ arụmọrụ gam akporo, n'oge na-adịghị anya ị gaghị echeta igodo gị niile.
Etu esi ese bọtịnụ Bixby iji malite ngwa ma ọ bụ iwu na Samsung Galaxy na One UI
N'ezie, nhazi nke bọtịnụ Bixby iji malite ngwa ma ọ bụ iwu nwere ike ịme na Samsung Galaxy na One UI.
Gbanwee na One UI Tuner ọkwa ọkwa, ntọala ngwa ngwa na ndị ọzọ na Samsung Galaxy na gam akporo achịcha
Iji Otu UI Tuner ị nwere ike ịhazi nke ọma Samsung Samsung emelitere na gam akporo. Ngwa nke sitere na XDA.
Esi gbanwee agba nke ọkụ ọkụ n'ụlọ gị site na Homelọ Google
Nwere ike ịnweta agba dị iche iche 42 site na ngwa Google Home iji gbanwee ụda na ikpo ọkụ nke gburugburu ebe obibi gị.
Etu ị ga-esi laghachi na ihe ochie Gmail na Android
Chọpụta karịa maka usoro ị ga - eme iji nweta ochie Gmail ngwa imewe azụ na ekwentị gam akporo gị.
Etu esi amata ngwa ndị eji RAM kacha na gam akporo
Chọpụta ụzọ ị ga - esi hụ iji RAM site na ngwa ndị arụnyere na ekwentị gam akporo.
Ntọala Google Play, ntọala niile ị kwesịrị ịma
M na-egosi gị isi ntọala Google Playh nke onye ọrụ ọ bụla gam akporo kwesịrị ịma iji debe akaụntụ na ngwaọrụ ha.
Otu esi emepụta aha eji egwu maka vidiyo gị n'ụzọ dị mfe
Nkuzi vidiyo nke m na-akuziri gị ka ị mepụta aha dị mma, aha ndị enyere gị iji jiri vidiyo ma ọ bụ akụkọ gị na Instagram, Facebook ma ọ bụ WhatsApp
Etu esi ekekọrịta saịtị na Google Maps
Mụtakwuo maka otu ị ga-esi rite uru na ntanetị Google Maps ma kwado saịtị ndị ọzọ.
Ise aghụghọ iji hazie Telegram na gam akporo
Chọpụta usoro aghụghọ ise a iji nweta ọtụtụ ihe na Telegram akaụntụ gị na gam akporo ma hazie iji ya.
Otu esi amanye kwụsị ngwa na gam akporo
Chọpụta ụzọ dị mfe ọ ga - esi mee ka nkwụsị nke ngwa dị na ekwentị gam akporo anyị dị mfe ole na ole.
Etu esi edozi gam akporo maka ndi okenye
Etu esi edozi ekwentị gam akporo na ụzọ dị mfe maka ndị agadi. Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji mee ka ọ dị mfe iji.
Otu esi eme ka Google Play kwalite ngwa gi
Chọpụta ihe gbasara mmelite nchedo na Google Play na otu esi arụ ọrụ a na gam akporo.
Etu esi achọpụta ngwa ọdịnala nke na-eziga mgbasa ozi ma ọ bụ mmapụta na ekwentị mkpanaaka gị
Ndị kpamkpam random ad pop acha ọkụ na-zitere site ngwa anyị wụnye. Anyị na-akụziri gị otu esi achọpụta ha n'ụzọ dị mfe.
Ebee ka ekwentị m dị?
Ebee ka ekwentị m dị? Ọ bụrụ na ị jụọla onwe gị na ihe karịrị otu oge, ngwa ahụ m ga-akwado ga-abụrịrị nnukwu enyemaka nye gị.
Kedu ihe gyroscope na gam akporo na gịnị ka ọ bụ maka?
Chọpụta karịa ihe gyroscope dị na ekwentị gam akporo yana uru ọ bara na smartphones taa.
Ọrụ 7 WhatsApp nke onye ọ bụla kwesịrị ịma ma ọ bụghị onye ọ bụla maara
Vidio vidio nke m na-egosi gị 7 ndụmọdụ ma ọ bụ 7 WhatsApp ọrụ onye ọ bụla kwesịrị ịma, ọ bụ ezie na ọ bụghị mmadụ niile maara na ha dị.
Etu ibudata ihe nkpuchi nke egwu si n’ulo akwukwo egwu m
Nge ntị na arịrịọ ndị ọrụ nke Androidsis Community na-abịakwute m site na iche iche ...
Esi gbanwee aha gam akporo Bluetooth
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji gbanwee aha Bluetooth nke ekwentị ama ama gị n'ụzọ dị mfe.
Ndi oji oji enyere aka ichebe ndu batrị na gam akporo?
Chọpụta ma ọ bụrụ na ọ nwere ezi uche iji akwụkwọ ahụaja ojii na ekwentị gam akporo gị iji belata oriri batrị na ekwentị gị.
Etu ị ga-esi soro azụmaahịa na Google Maps
Chọpụta otu ị ga - esi soro azụmaahịa n’ụzọ dị mfe na Google Maps na gam akporo ma mara maka onyinye na nkwalite.
Ngwa gam akporo na ịchekwa data
Chọpụta nke ngwa gam akporo nwere ugbu a data ịchekwa ma chọpụta otu ọ ga - esi rụọ ọrụ.
Etu esi tinye ma ọ bụ wepu usoro ịkwụ ụgwọ na Google Play
Chọpụta ụzọ dị mfe ọ ga-esi kwe omume ịgbakwunye ma ọ bụ wepu ụzọ nkwụnye ụgwọ na akaụntụ gị na Google Play ịzụta ngwa.
Gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na ekwentị gị gam akporo freezes?
Chọpụta ihe maka ndụmọdụ ndị a ịgbaso ọ bụrụ na ekwentị gam akporo gị ajụla oyi.
Etu ị ga - esi melite nzuzo nke akaụntụ Instagram gị
Chọpụta ụzọ dị iche iche anyị nwere ike iji melite nchekwa na nzuzo nke akaụntụ Instagram anyị na gam akporo.
Adiantum: Ihe nzochi ohuru maka njedebe ala na gam akporo
Choputa ihe banyere Adiantum, ihe nzochi ohuru nke Google emebere maka njedebe ala na gam akporo nke emeputara ugbua na ahia.
Etu esi enweta iOS12 Control Center na gam akporo ọ bụla.
Vidiyo nke m kwadoro ihe maka m bụ otu n'ime ngwa kacha mma iji megharịa Centrod na Control nke iOS12 na gam akporo.
Esi gbanwee ụdị igbe mbata na Gmail
Chọpụta otu ị ga-esi gbanwee ụdị igbe mbata dị na Gmail na ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe.
Ọ bụrụ na oge gara aga, egosiri m gị ngwa iji mepụta akwụkwọ mmado maka WhatsApp na ...
Otu esi eme ka ekwentị gam akporo anyị dị nchebe, dị ka Google si kwuo
Chọpụta ndụmọdụ ise ndị a sitere na Google nke ga - enyere anyị aka ịnwe ekwentị gam akporo dị mma karịa n’ụzọ dị mfe.
Site na arịrịọ a ma ama, ana m ahapụ gị nkuzi vidio bara uru nke m na-akụziri gị otu esi emepụta WebApps na Windows 10 ...
Gịnị bụ otu esi ahazi nsogbu na gam akporo
Chọpụta otu ị ga - esi hazi nsogbu esogbula na gam akporo yana ihe ọnọdụ a dị na ekwentị gị.
Esi gbanwee usoro mmeghe na gam akporo
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji nwee ike ịgbanwe ụkpụrụ nke ị kpọghee ekwt gam akporo gị na ụzọ dị mfe.
Chọpụta ụzọ abụọ dị iji nwee ike iweghachite ozi sms ehichapụ na ekwentị gam akporo anyị na-enweghị ọtụtụ nsogbu.
Otu esi emepụta ụzọ mkpirisi keyboard na gam akporo
Chọpụta otu ị ga - esi mepụta ụzọ mkpirisi igodo na gam akporo na - ejighi ngwa ọ bụla.
Esi gbanwee SIM PIN na gam akporo
Chọpụta otu ị ga-esi gbanwee PIN kaadị SIM gị na gam akporo yana otu esi echeta PIN ochie gị.
Ọrụ kachasị adọrọ mmasị nke Gboard na gam akporo
Chọpụta karịa usoro ọrụ a, ụfọdụ n'ime ha zoro ezo, enwere ike iji ya na Gboard ma nye ohere iji keyboard ahụ nke ọma.
Ihe mgbanaka nke New Stick Up Cam Security Camera dakọtara na Alexa
Igwefoto Ring Stick Up Cam bụ ụdị ọhụrụ sitere n'aka onye nrụpụta Amazon, nke ọ na-enye anyị ma nke kwekọrọ na ime na mpụga.
Etu esi etinye foto foto gị di na dijital
Nkuzi vidiyo bara uru nke, n'ime uzo di nfe ma di nma maka udi obula ...
Etu ị ga-esi gbanye bin na gam akporo
Chọpụta otu ị ga - esi nwee igwe eji egweri na ekwentị gam akporo gị maka Dumpster, ngwa na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Foto Izu Igwefoto Igwefoto Foto: Malware ọhụrụ na Google Play
Choputa ihe banyere malware ohuru a achoputala na Google Play na ngwa igwefoto nke ugbua ewepụgoro.
Agbanyeghị na ịnwee mgbọrọgwụ, ịnwere ike melite ogo ọdịyo nke LG V30 gị site na DTS 3D Stereo sound mode nke nwere oke na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Esi gbanwee ọsọ ọsọ nke vidiyo na YouTube
Gbanwe ọsọ ọsọ nke vidiyo na YouTube na-enye anyị ohere ịbịaru n'oge na-adọrọ mmasị na-enweghị atụfu ọdịnaya.
Esi gbanwee mkpebi nke vidiyo YouTube iji chekwaa data
Anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi gbanwee mkpebi nke vidiyo YouTube na ngwa gam akporo.
Otu esi amata onye ọrụ nọmba ekwentị bụ
Chọpụta ụzọ dị mfe ị ga - esi chọpụta onye ọrụ nke nọmba ekwentị ọ bụla nwere ekele maka CNMC
Esi belata ndabere na ekwentị gam akporo gị
Chọpụta usoro aghụghọ a ga - enyere gị aka belata ịdabere na ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe.
Etu ibudata ngwa na gam akporo na ndebanye aha gara aga
Chọpụta otu ị ga - esi budata egwuregwu ma ọ bụ ngwa edenyere aha na Google Play na ekwentị gam akporo gị.
Esi ewepu ihuenyo na ekwentị gam akporo
Chọpụta ụzọ dị iche iche dị na gam akporo mgbe ị na-ewere screenshots na ụdị dị iche iche nke ekwentị.
Gmail na-akwadebe maka ọbịbịa nke ozi dị ike. Kedu ihe ha bụ na gịnị ka ha bụ?
Gini bu ozi di omimi nke a gha abanye na Gmail? Chọpụta ihe banyere njirimara a na ngwa Google Mail na gam akporo.
Otu esi egbochi aghụghọ ma ọ bụ malware na WhatsApp
Chọpụta karịa banyere WhatsApp scams ma ọ bụ nje nwere ike mfe amata na gị gam akporo ekwentị.
Etu esi emegharị ngosi na Huawei P20 PRO
Vidio nke m na-egosi gị site na nkwụsị na otu nhọrọ nhọrọ ọhụụ ọhụụ si arụ ọrụ na Huawei P20 PRO na gam akporo achị EMUI 9.0.
Kedu ihe kacha nta nke ngwa na Google Play dị ka mba ahụ si dị?
Chọpụta ihe kachasị dị ntakịrị na nke kachasị enwere ike ịtọ maka ngwa na Google Play dabere na mba ahụ.
You mara ka esi amata ọdịiche dị na email phishing na nke a pụrụ ịtụkwasị obi? Chọpụta na Google
Chọpụta ihe banyere egwuregwu a Google kere nke ị nwere ike mfe ịmata phishing ozi ịntanetị na bịara email gị.
Gam akporo Ndenye Ntọala na iOS Control Center
Vidiyo nke m na-akụziri ha ka ha nwee Ndenye Ndenye nke Adroid na Control Center nke iOS, ya bụ, na ala nke gam akporo anyị.
Etu ị ga-esi gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ọkwa Chrome na android
Chọpụta otu ị ga - esi jikwaa, kwado ma ọ bụ gbanyụọ nkwanye nkwalite na Google Chrome na ekwentị gam akporo gị.
Otu esi ahọrọ chaja ikuku maka ekwentị gam akporo gị
Chọpụta akụkụ ndị ị ga-ebu n’uche mgbe ị na-ahọrọ chaja ikuku na-arụkọ ọrụ na ekwentị gam akporo gị.
Etu esi achọ ozi na WhatsApp
Chọpụta otu ị ga-esi chọọ ma chọta ozi na mkparịta ụka gị na WhatsApp wee si otú a weghachite ozi.
Esi mee ka GPS na gam akporo rụọ ọrụ ngwa ngwa
Chọpụta ngwa a nke ị nwere ike ịnweta GPS nke ekwentị gam akporo gị ịrụ ọrụ ngwa ngwa n'ụzọ dị mfe.
Etu esi achọpụta adreesị IP nke ekwentị gam akporo gị
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji chọpụta adreesị IP na gam akporo, ma adreesị IP onwe ya na adreesị IP ọha.
Etu ị ga-esi chekwaa ngwa na faịlụ dị na Android
Chọpụta otu ị ga-esi nwee ike ichedo ngwa gam akporo gị na paswọọdụ ekele AppLock, ngwa maka ya.
Etu esi tinye akaụntụ Google nke abụọ na gam akporo
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji tinye akaụntụ Google nke abụọ na ekwentị ekwentị gị.
Ibudata ma wụnye omenala ROM Mbilite n'ọnwụ Remix 7 dabere na A gam akporo: dị ugbu a maka ọtụtụ ụdị
Achịcha Mbilite n'ọnwụ nke gam akporo Android dị ugbu a maka nbudata na ntinye na ụdị ekwentị dị iche iche.
Google Pay: Kedu ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ na nke ụlọ akụ na-akwado
Chọpụta ihe niile gbasara Google Pay, ihe ọ bụ na etu usoro ịkwụ ụgwọ a si arụ ọrụ, yana ụlọ akụ ndị dakọtara.
Ikuku na-akwụ ụgwọ na gam akporo: Kedu ihe ọ bụ na ụdị ndị a dakọtara na ya?
Chọpụta ihe niile gbasara ikuku na-akwụ ụgwọ na gam akporo, ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ na mgbakwunye na ekwentị ndị dakọtara na ya.
The kacha mma uzo ozo ka Miracast for Android
Chọpụta ihe banyere teknụzụ abụọ nke dochiela Miracast na ngwaọrụ gam akporo na oge na otu ha si arụ ọrụ.
[APK] Otu esi kọwaa ihe mkpịsị aka mkpịsị aka Oneplus 6T na-emeghe na gam akporo ọ bụla
M na-akụziri gị ịmegharị akara mkpịsị aka na-emeghe na ihuenyo Oneplus 6T. Ngwa gbadoro anya ịhazi onwe ya na enweghị nchebe.
Etu esi ahụ abanye na akaụntụ Instagram gị
Chọpụta otu ị ga - esi hụ nnabata nke akaụntụ Instagram gị wee chọpụta ma ọ bụrụ na onye ọzọ abanye n’enyeghị gị ikike.
Chọpụta karịa gbasara nkenye nke netwọkụ 5G n'ụwa niile na ndịiche anyị na-ahụ maka 4G dị ugbu a.
Etu esi edozi tweets oge na ngwa Twitter
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịgaghị enwe ike ịgụ ndepụta Twitter gị site na ngwa ngwa, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị otu esi eme ya na ekwentị gam akporo gị.
Etu esi ewepu ngwaọrụ Smart Life
Bara uru video nkuzi nke m na-akọwa otú ị ga-esi kwụpụ a Smart Life ngwaọrụ. Valid maka smart plọg, bulbs wdg, wdg ...
Achịcha gam akporo maka Galaxy Note 9 ga-enye anyị nhọrọ iji rụọ ọrụ Dolby Atmos maka egwuregwu n'adabereghị
Ihe mmelite gam akporo maka Samsung Galaxy Note 9 ga - enyere anyị aka ịmalite ụda Dolby Atmos maka egwuregwu naanị.
Etu esi enweta mmetụta agba na foto ojii na oji
Vidiyo nkuzi nke m na-egosi gị otu esi enweta mmetụta agba na foto ewere na oji na ọcha, ọmarịcha agba mara mma nke ọma.
Thezọ niile iji meghee Google Assistant na gam akporo
Chọpụta ụzọ niile anyị nwere na ekwentị gam akporo iji nwee ike imeghe Google Assistant n'ụzọ dị mfe.
Aghụghọ iji gbochie gị gam akporo ekwentị na-aga ngwa ngwa
Chọpụta aghụghọ ise a ma ọ bụ atụmatụ nke ị ga-enwe ike igbochi ekwentị gam akporo gị iji nwayọ na-arụ ọrụ.
Chọpụta usoro anyị ga - agbaso ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe nchapụta ma ọ bụ ụcha ọkụ na ihu igwe gam akporo.
Etu ịtọlite ​​kaadị akụ na Instagram
Chọpụta otu ị ga - esi tinye kaadị kredit gị na Instagram ka ị nwee ike ịzụrụ ihe na netwọkụ mmekọrịta.
Etu ị ga - esi mara ma ịchọrọ ịgbanwe batrị ekwentị gam akporo gị
Chọpụta ihe banyere otu ị ga - esi lelee ọnọdụ batrị gị na ekwentị gam akporo gị maka ngwa.
Otu esi edozi ekwentị gam akporo gị
Chọpụta karịa otu ị ga-esi hazie ekwentị gam akporo gị. Nzọụkwụ iji soro ndị mmadụ na ekwentị gam akporo mbụ ha.
OnePlus na-arụ ọrụ na ntanetị ikuku maka ụdị 2019 ya
Chọpụta ihe banyere mkpebi OnePlus iji tinye ikuku ikuku na ekwentị ha na-ebupụta n'afọ a.
Kedu ihe bụ na otu esi arụ ọrụ Miracast?
Miracast: Ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ na otu o si malite. Chọpụta ihe banyere teknụzụ a na mkpa ọ dị na gam akporo.
Etu ị ga-esi ewepu ọtụtụ ngwa ọdịnala n'otu oge na-enweghị mgbọrọgwụ na Google Play
Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ batara na Google Play, nke na-enye anyị ohere iwepụ ọtụtụ ngwa n'otu oge ahụ.
Otu esi amanye ịmalitegharị gam akporo gam akporo na batrị na-enweghị iwepu
Chọpụta ụzọ ị ga - esi malitegharịa ekwentị mkpanaka gị ma ọ bụrụ na ịnwere mkpanaka nwere batrị na-enweghị iwepu ya n'ụzọ dị mfe.
Aghụghọ na-uru nke Google ịsụgharị na android
Chọpụta aghụghọ anọ a nke ị ga - eji nweta uru nke onye ntụgharị Google na ekwentị gam akporo gị.
Ayszọ Were Uru nke Bixby Button na gị Samsung ekwentị
Chọpụta ụzọ ị ga - esi nye ndị ọzọ ojiji bọtịnụ Bixby na ekwentị Samsung gị n'ụzọ dị mfe ma si otu a jiri ya maka ihe bara uru maka gị.
Google Play wepụrụ 85 adịgboroja ngwa na-egosi naanị mgbasa ozi
Chọpụta karịa ihe ndị a 85 adịgboroja ngwa ọdịnala na-ewepụla Google Play n'ihi na ha raara onwe ha nye igosipụta naanị mgbasa ozi.
Esi lelee ozi nzuzo na Facebook ozi na-enweghị iji ngwa ahụ
Chọpụta otu ị ga-esi lee ozi Facebook Messenger gị gụnyere ndị nkeonwe na gam akporo na-enweghị iji ngwa ahụ.
Etu ị ga-esi nweta akụkọ ntolite YouTube na android
Ọ bụrụ na ị na-eche mgbe niile ka anyị ga - esi nweta akụkọ ntolite egwu YouTube na ọnụahịa gam akporo anyị, mgbe ahụ anyị ga - egosi gị otu
Ihe igwefoto di nma na gam akporo kwesiri inwe
Chọpụta ihe ndị kachasị mkpa igwefoto ọ bụla dị na ekwentị gam akporo kwesịrị ịdị mma.
Etu esi eji ndọtị Google Chrome na ekwentị gam akporo gị
Chọpụta otu esi eji mgbakwunye Google Chrome na gam akporo ekele na ihe nchọgharị Yandex nke Russia na-enye gị ọrụ a.
Otu esi echekwa ozi na Telegram
Chọpụta ụzọ ị ga-esi chekwaa ozi na ngwa Telegram ma si otú a ghara ịhapụ ozi a n'oge ọ bụla.
Samsung Secure Folder: Ihe Ọ Bụ Na Otú O Si Arụ Ọrụ
Chọpụta ihe gbasara nchekwa nchekwa Samsung na ịba uru ị nwere ike inye ya ma ọ bụrụ na ị nwere akara ekwentị nwere ọrụ a.
Etu esi enyocha malware na gam akporo na Play Chebe
Chọpụta ihe banyere otu esi enyocha ngwa ndị ị rụnyere na ekwentị gam akporo gị maka malware site na iji Google Play Chebe.
Esi hazie nne na nna njikwa na gam akporo
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji nwee ike rụọ ọrụ ma hazie njikwa ndị nne na nna na ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe.
Kedu ihe kpatara ekwentị gam akporo ji eji batrị otutu mgbe ọ na-abaghị uru
Chọpụta ihe kpatara ekwentị gam akporo gị ji eji batrị nke ukwuu mgbe ọ na-abaghị uru ma ọ bụrụ na enwere ihe ị ga - eme.
Chọpụta usoro ọrụ ndị ị kwesịrị ịkwụsị mgbe ị zụrụ ekwentị gam akporo ọhụrụ. Ọrụ kachasị arụ ọrụ.
Aghụghọ iji melite ụda nke ekwentị gam akporo gị
Chọpụta aghụghọ ndị a nke ị nwere ike iji melite ụda ekwentị gam akporo gị na enweghị nsogbu ọ bụla ma nwee ogo dị mma.
Etu esi ekepụta akaụntụ Google ọhụrụ na gam akporo
Chọpụta usoro dị mfe anyị ga - agbaso iji mepụta akaụntụ Google ọhụrụ na ekwentị gam akporo anyị.
Otu esi edozi nsogbu di na Google Play
Chọpụta otu anyị ga - esi kwụsị ahụhụ ahụ na - ekwu na anyị nwere nbudata na - echere na Google Play na gam akporo.
Nchọpụta kachasị mma banyere Google Play
Chọpụta ihe ise a gbasara Google Play nke ị maghị na ha ga - enyere gị aka ịmatakwu banyere ụlọ ahịa ngwa gam akporo.
Etu esi hazie kaadi microSD na gam akporo
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji nwee ike ịhazi kaadi microSD ozugbo na ekwentị gam akporo gị, n'ụzọ dị mfe.
Etu esi edozi Network Not Registered Nsogbu na gam akporo
Chọpụta nhọrọ dịgasị iche iche anyị nwere iji dozie njehie ahụ na-ekwu Ọ bụghị edebanye na netwọkụ na ekwentị gam akporo anyị.
Esi ewepu nje na ekwentị gam akporo gị
Chọpụta ụzọ niile anyị nwere na gam akporo iji kpochapụ nje na ekwentị anyị. Methodszọ dị iche iche dị.
Etu esi eji Samsung mgbagharị otu UI ngagharị
Igodo site na mmegharị nke Otu UI na-enye ohere ụdị ọzọ mmekọrịta mmekọrịta na Samsung mobile. Gbalịa aghụghọ ndị a na otu esi arụ ọrụ.
Ọ bara uru ịzụta Android dị elu site na afọ abụọ gara aga?
Chọpụta ihe banyere ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụ ọnụ ahịa ịzụrụ ekwentị gam akporo dị elu site na afọ abụọ gara aga ma ọ bụ na enwere nhọrọ ndị ọzọ.
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji gbanwee ụdaolu nke otu kọntaktị na ekwentị gam akporo gị.
Chọpụta ihe niile gbasara ọnọdụ gbara ọchịchịrị na gam akporo. Mmalite nke ọnọdụ a na uru ọ na-ahapụ anyị na ekwentị eji ya.
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji hichapụ akaụntụ Instagram gị, enwere ike na ekwentị gam akporo gị.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na Google Play agaghị emeghe na gam akporo
Chọpụta ụzọ niile anyị nwere ike isi mezuo Google Play anaghị emepe na ekwentị gam akporo anyị.
Aghụghọ maka batrị gị gam akporo ekwentị
Chọpụta aghụghọ ndị a maka batrị ekwentị gam akporo gị, nke iji nwee ọrụ ka mma ma ọ bụ chịkwaa ya.
Etu esi ekekọrịta kọntaktị gị site na iji WhatsApp
Chọpụta ụzọ dị mfe anyị nwere ike isi kesaa kọntaktị na onye ọzọ na-eji WhatsApp na ekwentị gam akporo anyị.
Etu esi gbanyụọ mgbasa ozi Xiaomi na MIUI
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji kwụsị mgbasa ozi na - egosi na ekwentị Xiaomi gị yana sistemụ nrụọrụ dị na ya.
Etu esi ebudata vidiyo Facebook na gam akporo
Chọpụta ụzọ dịnụ iji budata vidiyo Facebook na ekwentị gam akporo gị. Methodszọ abụọ dị maka nke a.
Kedu ihe bụ ihe mmetụta kachasị mkpa na ekwentị gam akporo gị?
Chọpụta isi ihe mmetụta anyị na-ahụ na ekwentị gam akporo anyị na uru ọ bara nke ọ bụla n’ime ha.
Ndụmọdụ iji zere ịgbapụ na batrị mgbe ị na-eme njem
Chọpụta aghụghọ ndị a ka ị ghara ịga batrị na ekwentị gam akporo gị n'oge ezumike Krismas ndị ọzọ.
Chọpụta ụzọ niile anyị nwere ugbu a iji budata vidiyo Twitter na ekwentị gam akporo anyị.
Chọpụta ihe ị ga - eme iji dozie ozi Google Play Store kwụrụ na ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe.
Chọpụta ndụmọdụ ndị a dị mfe ị ga - eji zọpụta ego na ịzụrụ ekwentị gam akporo ọhụrụ gị.
Ihe batrị iburu n'uche mgbe ị na-azụrụ ekwentị gam akporo
Chọpụta akụkụ ndị a gbasara batrị ị ga-abanye na akaụntụ mgbe ị gara ịzụta ekwentị gam akporo ọhụrụ.
Etu esi ehichapu data na ekwentị gam akporo na ihuenyo agbajiri
Chọpụta otu ị ga-esi hichapụ data na ekwentị gam akporo ma ọ bụrụ na ihuenyo ngwaọrụ agbajiri. Possiblezọ abụọ nwere ike.
Etu esi wụnye Google Canvas, ngwa ọhụụ Google
Etu esi amata ma ọ bụrụ na agbadaala WhatsApp na oge akọwapụtara
Chọpụta ụzọ ị ga-esi mara ma WhatsApp adaala n'oge ọ bụla site na ekwentị gam akporo gị wee si otú a mara ọnọdụ nke ngwa ahụ.
Otu esi ehichapụ oyiri kọntaktsị na ekwentị gam akporo gị
Chọpụta usoro nke anyị nwere ike ịkwụsị kọntaktị oyiri na ekwentị gam akporo anyị na ngwa kọntaktị Google.
Otu esi emepụta otu WhatsApp ebe naanị ndị nchịkwa nwere ike ikwu okwu
Chọpụta usoro iji nwee ike mepụta otu na WhatsApp nke naanị ndị nchịkwa nwere ike ikwu n'ime ya. Kọwaa nzọụkwụ site na nzọụkwụ.
Otu esi ehichapụ ngwaọrụ Bluetooth metụtara na ama anyị
Ọ bụrụ n ’ị chere na oge eruola ihicha ma wepu ụfọdụ ngwaọrụ bluetooth anyị na - ejighi aba, anyị ga - egosi gị otu esi eme ya.
Otu esi edekọ ihuenyo mkpanaka gị na-enweghị mgbasa ozi na n'efu na MNML Screen Recorder
MNML Screen Recorder bụ ezigbo ngwa ịdekọ ihuenyo nke mkpanaka gị yana na, ọ bụ ezie na ọ dị na beta, zuru oke maka mgba ndị a.
Ofdị batrị dị na ekwentị gam akporo
Chọpụta ihe banyere ụdị batrị dị iche iche ugbu a na gam akporo, gbakwunye ole na ole na-emepe emepe ugbu a.
Otu esi eme ka aro ndi ohuru na Google Chrome
Chọpụta karịa gbasara atụmatụ ntụzịaka ọhụụ nke ewebatara na Google Chrome na gam akporo yana otu esi eme ya.
Etu ị ga - esi kpuchido onyogho ndị ahụ inwere na mkpanaka gị na mkpuchi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile nwere foto ndị ahụ anyị achọghị ka onye ọ bụla hụ na mgbe ụfọdụ anyị na-echefu na ha nọ na ebe a na-ese ihe. Ihe mkpuchi na-abịa nyere anyị aka.
Etu esi enweta ezigbo ego na egwuri egwu n'asọmpi ejiji ejiji
Etu ị ga - esi merie ezigbo ego n’egwuregwu asọmpi ekwentị mkpanaaka na - eti gị ekeresimesi a Ihe omuma di nkpa iji gosiputa ihe omuma gi.
Aghụghọ ka mma ịnyagharịa na Google Chrome
Chọpụta karịa aghụghọ anọ ndị a ị ga - esi nwee ike ịnyagharịa na Google Chrome na ekwentị gam akporo gị.
Otu esi emepụta vidiyo nchịkọta Gị afọ na Facebook
Chọpụta ihe banyere usoro iji mepụta vidiyo na nchịkọta nke afọ gị na Facebook n'ụzọ dị mfe na ekwentị gam akporo gị.
Etu esi gbanyụọ amamọkwa YouTube na gam akporo
Chọpụta usoro anyị ga-agbaso na ngwa YouTube na gam akporo iji gbanyụọ nkwupụta nke ngwa ahụ.
Kedu ụdị ụdị ngwa ngwa dị na gam akporo
Chọpụta ihe banyere ụdị dị iche iche nke ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa dị ugbu a na ekwentị gam akporo.
Otu esi emechi taabụ niile na Firefox maka gam akporo
Ihe nchọgharị Mozilla Foundation, Firefox, bụ otu n'ime nhọrọ ndị kachasị mma anyị nwere taa na ...
Gini mere ngwa gam akporo ji ewere otutu ohere?
Chọpụta isi ihe kpatara na ngwa gị na ekwentị gam akporo gị na-ewere ohere dị ukwuu na ihe anyị nwere ike ime banyere ya.
Gịnị bụ WiFi 6? Kedu uru ọ nwere?
Chọpụta ihe banyere WiFi 6, ọkọlọtọ njikọ ikuku ọhụụ nke a ga-etinye n'ahịa na afọ na-esote.
Etu esi emeghe taabụ emechiri emechi na Chrome maka gam akporo
Iji mepee taabụ ndị anyị mechiri site na ndudue, ọ dị mfe ma ọ bụrụ na anyị soro usoro ndị anyị kọwara na isiokwu a.
Esi rụọ ọrụ ọchịchịrị na Google Play Games
Chọpụta usoro iji rụọ ọrụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ngwa Google Play Games na ekwentị gam akporo anyị. Arụ dị ugbu a.
Etu ị ga-esi lee ọnụ ọgụgụ igodo gị na Google Maps
Chọpụta ihe maka atụmatụ njegharị ụzọ na Google Maps yana otu ị ga-esi jiri ya na gam akporo.
Ngwunye 30 na-agba ume: Kedu ihe bụ na otu esi akwụ ụgwọ ngwa ngwa nke ọrụ OnePlus 6T
Chọpụta ihe niile gbasara 30 Warp Charge 6, teknụzụ ọhụụ ọhụụ na-ewebata na OnePlus XNUMXT McLaren Edition dị ugbu a.
Otu esi eme Google Play Games na-akpaghị aka ịbanye na egwuregwu
Chọpụta otu anyị ga-esi rụọ ọrụ nbanye akpaghị aka na Google Play Games maka egwuregwu dakọtara na profaịlụ.
Aghụghọ iji nweta ihe na Instagram
Chọpụta usoro aghụghọ a nke ị ga - enweta ọtụtụ ihe na akaụntụ Instagram gị na ekwentị gam akporo gị.
Gboard na-agbakwunye isiokwu ọhụrụ 54 na nsonaazụ gradient
Chọpụta karịa maka isiokwu gradient 54 ọhụụ na-apụ na Gboard, ngwa keyboard maka gam akporo.
Usoro iji ree ekwentị gam akporo gị na Wallapop
Chọpụta aghụghọ ndị a nke ị ga - enwe ike ire ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe na Wallapop.
Etu ị ga - esi nwee ụda pụrụ iche nke Google Pixel na ekwentị ọ bụla nwere gam akporo
Ọ bụrụ na ị nwere mkpanaka nwere gam akporo, ị nwere ike ịwụnye Google ụda ka ịnwe abụ olu ụtọ na ụda nke Google Pixel.
Esi nweta nseta ihuenyo na Google Pixel 3
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma etu esi enweta nseta ihuenyo na Google Pixel 3 ọhụrụ ahụ, n’isiokwu a anyị na-egosi gị ụzọ niile dị.
Etu esi enye onyinye na NGO na gam akporo na Google Play
Chọpụta otu anyị ga-esi nye onyinye na Google Play na NGO na oge ekeresimesi site na ekwentị gam akporo anyị.
Etu ibudata ma wụnye MIUI 10.1 na igwe kwụ ọtọ na Pocophone F1
MIUI 10.1 na gam akporo 9.0 achịcha dị ugbu a maka nbudata na Pocophone F1. Anyị na-akọwa otu esi etinye ya!
Otu esi eme ka ekweisi gị dị ọnụ ala dịkwuo mma karịa na ngwa a
Site na Ezi-Fi ị nwere ike melite ogo ụda nke ekweisi gị dị ọnụ ala. Ma ọ bụ eziokwu, ọ na-arụ ọrụ. Anyị anwalewo ya ma anyị ga-agwa gị banyere ya.
Ihe nchebe nke December maka Samsung Galaxy S9 + dị ugbu a
Mmelite nchedo December maka Samsung Galaxy S9 + dị ugbu a maka nbudata.
Etu esi eziga ozi olu n'ụlọ n'ụlọ Google Home
Ma iji Google Home ma ọ bụ Home Mini na ekwentị gị, ị nwere ike ịkpọsa ozi olu onye ọ bụla nọ n'ụlọ ga-anụ.
Esi lelee akụkọ ihe mere eme nke nyocha mgbanwe na Google Play
Chọpụta otu anyị ga-esi nweta akụkọ mgbanwe nke ọkwa maka ndị ọrụ ndị ọzọ bulite na Google Play.
Kedu ihe ndepụta egwuregwu Storelọ Ahịa na-arụ ọrụ?
Ọ bụrụ na ịmabeghị nkọwa banyere otu ndepụta chọrọ Storelọ Ahịa Play na-arụ ọrụ, anyị ga-egosi gị otu o si arụ ọrụ yana ihe ọ bụ n'ezie.
Etu esi ekpochapụ usoro ọchụchọ gị na Storelọ Ahịa Play
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ihichapụ akụkọ ọchụchọ nke searchlọ Ahịa Play, n'isiokwu a anyị na-egosi gị usoro niile ị ga - agbaso iji nweta ya.
Otu esi egbochi ụzọ mkpirisi ka emepụtara na ihuenyo ụlọ nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu nke anyị rụnyere
Ọ bụrụ na ike gwụrụ anyị ịhụ oge ọ bụla anyị wụnye ngwa site na Storelọ Ahịa Play na -emepụta ụzọ mkpirisi maka anyị, anyị ga-egosi gị otu ị ga-esi zere ya.
Aghụghọ iji nweta ọtụtụ ihe na akaụntụ Netflix gị
Chọpụta karịa aghụghọ anyị nwere ike iji nweta ọtụtụ ihe na akaụntụ Netflix anyị na ekwentị gam akporo.
Aghụghọ na-ana gị gam akporo ekwentị n'ụzọ ziri ezi
Chọpụta usoro na usoro iji kwụọ ekwentị gam akporo gị n'ụzọ ziri ezi ma zere nsogbu na batrị ma ọ bụ ọrụ ya.
Ezula ekwentị gị? Etu esi ewepu WhatsApp na ya
Chọpụta usoro ị ga - agbaso ka ị nwee ike ịkwụsị akaụntụ WhatsApp gị ma ọ bụrụ na ezuru ekwentị gam akporo gị.
Etu esi ewepu wijetị site na ogwe ọchụchọ na gam akporo gị
Chọpụta ụzọ dị mfe iji wepu wijetị site na ogwe ọchụchọ na ihuenyo ekwentị gam akporo gị.
Etu esi ejikwa ma belata oriri data na gam akporo
Chọpụta ihe niile anyị nwere ike ime iji belata ma nwee ezigbo njikwa nke data data mkpanaka na ekwentị gam akporo anyị.
Etu esi ebudata nkata, onyonyo na vidiyo site na Google Allo
Ozugbo Google kwuputara mmechi nke Google Allo ọ nwere ike ịbụ oge ịgbanwe ngwa izipu ozi, mana nke mbụ anyị ga-eme ndabere data niile
Aghụghọ iji mee ka mma iji gam akporo ekwentị gị
Chọpụta aghụghọ ise a dị mfe iji nwee ike iji ekwentị gam akporo gị n'ụzọ kachasị mma ma nwee ahụmịhe ka mma.
Etu esi tinye ndepụta okwu na oku na Skype na gam akporo
Chọpụta ụzọ dị mfe eji eji ndepụta okwu na oku Skype gị na gam akporo, ihe ọhụụ nke ngwa ahụ.
Etu esi ewepu ngwaọrụ ejikọrọ na netwọk Wi-Fi gị na ekwentị gam akporo gị
Anyị na-akuziri gị otu esi kwụpụ ngwaọrụ mkpịsị aka achọghị na netwọkụ Wi-Fi gị na NetCut ka ị nwee ike ịnụ ụtọ njikọ ọsọ ọsọ.
Etu esi lelee ma hichapụ akụkọ ihe mere eme na gam akporo
Chọpụta ụzọ anyị ga-esi nweta akụkọ ntolite nke iji ngwa na gam akporo yana otu esi ehichapụ ma ọ bụ kwụsị.
Njikwa niile nke olu gam akporo gị
Etu esi wụnye MIUI 10.1 na igwe kwụ ọtọ na Xiaomi Mi 8 na Mi 8 Explorer: mmelite ahụ ruru ụzọ a
Xiaomi na-ewepụta mmelite na Mi 8 na Mi 8 Explorer nke na-abịa na EMUI 10.1.2 yana ụlọ gam akporo 9.0 achịcha.
Etu ị ga - esi mara ma ọ bụrụ na ọ gbanwee oge ịgbanwee ekwentị gam akporo
Chọpụta ihe ngosi ndị a nke ị ga - eji mara ma oge eruola ịgbanwe ekwentị gam akporo gị maka ụdị ọhụụ.
Etu esi gbanyụọ autoplay na ibe obibi YouTube
Chọpụta usoro iji gbanyụọ ọrụ autoplay ọhụrụ na ibe ụlọ na ngwa YouTube.
Etu ị ga-esi amata ụdị ohere ngwa ndị awụnyere na ama anyị nwere
Anyị na-egosi gị otu anyị ga - esi amata oge niile ihe ikikere nke ngwa awụnyere na ngwaọrụ anyị nwere.
4 aghụghọ ka mma iji YouTube na gam akporo
Chọpụta nhọrọ a nke aghụghọ anọ ga - enyere gị aka iji ngwa YouTube rụọ ọrụ na ekwentị gam akporo gị.
Ngwa n'efu maka gam akporo nke anyị nwere ike ịmepụta akwụkwọ mmado maka WhatsApp n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe.
Nsogbu akwụkwọ ahụaja nkịtị na otu esi edozi ha na gam akporo
Chọpụta ọtụtụ nsogbu na-enweghị akwụkwọ ahụaja na gam akporo yana ihe ngwọta dịịrị ha n'ụzọ dị mfe.
Otu esi edekọ oku na Skype na-enweghị ngwa ndị ọzọ
Chọpụta otu anyị ga-esi edekọ oku ma ọ bụ oku vidiyo na ngwa Skype na-enweghị mkpa ngwa ndị ọzọ iji mee nke a.
Ndụmọdụ iji debe ekwentị gam akporo gị
Chọpụta ndụmọdụ ndị a iji mee ka ekwentị gam akporo gị kwụsie ike n'oge niile n'ụzọ dị mfe.
Otu esi ehichapụ ngwa na nchịkọta Google Play
Chọpụta ụzọ dị mfe iji were hichapụ egwuregwu ma ọ bụ ngwa sitere na nbudata nbudata gị na Google Play na ngwa ahụ n'onwe ya.
Ego ole ka i nwere ma ọ bụ nwee na gam akporo gị? Ebe i nwere ike mara
Chọpụta usoro nke ị nwere ike iji mara ọnụ ọgụgụ nke ngwa ị nwere ma ọ bụ nweela na ekwentị gam akporo gị.
Gịnị mere ibidogharịa ekwentị gam akporo gị ji edozi ọtụtụ nsogbu ya?
Chọpụta ụzọ kachasị mfe iji dozie nsogbu na gam akporo: Malitegharịa ekwentị. Chọpụta ihe mere o ji dị mma.
90% nke ngwa ndị China na-anakọta data onye ọrụ
Chọpụta ihe banyere data anakọtara site na ụfọdụ ngwa China dịka nyocha emere na mba ahụ.
Kedu ihe kpatara na anyị nwere ike ịkpọ XNUMX ọbụlagodi na anyị enweghị mkpuchi
Chọpụta karịa ihe kpatara anyị nwere ike ịkpọ nọmba mberede ma ọ bụrụgodi na anyị enweghị mkpuchi na ekwentị anyị.
Kedu ụdị ụda dị na gam akporo?
Chọpụta ụdị ụda anyị nwere na ekwentị gam akporo anyị yana akụkụ kachasị mkpa gbasara nke ọ bụla.
Chọpụta ihe gbasara igwe na igwe na uru ọ bara n’echiche a anyị na-anụ kwa oge na ekwentị gam akporo anyị.
[Emelitere na vidiyo-nkuzi] Otu esi emepụta usoro izizi gị na Google Assistant
Onye na enyere Google aka bu olu enyemaka nke n’enye anyi ohere ime oru di iche-iche ekele maka usoro ihe ndia. Kwuo "Party" ma hụ ihe ọ ga-eme.
Etu esi eji Gboard onye ntụgharị okwu n'otu oge
Chọpụta otu esi atụgharị ederede na-akpaghị aka maka Gboard na ngwa ọ bụla na ekwentị gam akporo anyị.
Ihe ị ga-eme tupu ịre ekwentị gam akporo gị
Chọpụta ihe ị ga-eme tupu ịga ree ekwentị gam akporo gị, iji zere nsogbu ma ọ bụ tufuo data na ya.
Etu ị ga - esi jiri ụlọ ndụ Smart Life dobe ụlọ gị, na - emefu Euro ole na ole
Etu esi agbapụta koodu ngwa ma ọ bụ kaadị onyinye site na giftlọ Ahịa Play
Ọ bụrụ na ịnwere koodu ngwa iji budata n'efu ma ọ bụ chọọ iji kaadị onyinye Google Play, lee otu esi eme ya.
Etu esi wụnye ụdị anụ ụlọ nke MIUI 10 na Xiaomi Mi 5S Plus: ọkwa ọhụrụ ahụ bịarutere na ekwentị mkpanaaka
I nwere ike ibudata ma wụnye nkwụsi ike nke MIUI 10 na Xiaomi Mi 5s Plus: anyị ga-akọwa usoro ị ga-emerịrị.
Etu ị ga-esi tinye nzacha spam na ngwa ekwentị Google
Chọpụta usoro anyị ga - agbaso iji mee ka spam filter na ngwa ekwentị Google wee chefuo maka oku spam ndị a.
Otu esi ehichapụ akaụntụ WhatsApp gị
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji nwee ike ihichapụ akaụntụ WhatsApp gị site na ngwa izipu onwe ya.
Ndụmọdụ iji mee ka ekwentị gam akporo gị dị ogologo
Chọpụta usoro usoro a iji mee ka ekwentị gam akporo gị ruo ogologo oge o kwere mee n'ọnọdụ kachasị mma.
Esi tinye asụsụ ọhụrụ na kiiboodu nke ekwentị anyị
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ itinye asụsụ ọhụrụ na keyboard nke gam akporo ekwentị gị, lee usoro ị ga - eso.
Etu esi melite ngwa ngwa Play Store na ụdị ya kachasị dị
Chọpụta usoro anyị ga - agbaso iji melite Storelọ Ahịa Play na ụdị kacha dị nso.
Otu esi amalite site na iji ekwentị gam akporo gị
Chọpụta ntuziaka a nke ị ga-eji mara usoro mbụ ị ga-eji jiri ekwentị gam akporo gị mụta otu esi eji ya.
Etu esi eji egwu Spotify site na klọọkụ mkpu na ngwa elekere Google
Chọpụta otu anyị ga - esi jiri abụ Spotify dịka elekere oti mkpu na mkpu nke ngwa elekere Google na gam akporo.
Otu esi ehichapụ nọmba ekwentị metụtara na akaụntụ Google anyị
Oge ọ bụla anyị mepere akaụntụ email, dịka iwu n'ozuzu, ọrụ ahụ abụghị naanị na-ajụ anyị maka otu ...
Etu ị ga-esi amata oge anyị nọ na YouTube ụbọchị niile
YouTube abụrụla naanị ikpo okwu n'ụwa na eme vidiyo nke ihe ọ bụla enwere isiokwu us.
Storelọ ahịa Playlọ Ahịa na-eme ka atụmatụ nke ọkwa na echiche dị ọhụrụ
Chọpụta ihe gbasara ntanetị ọhụụ ewepụtara na ngalaba ntụle na echiche dị na Storelọ Ahịa Play, a ga-ewepụta ya n'oge na-adịghị anya n'ụwa niile.
Kedu ihe anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-azụ ekwentị gam akporo?
Chọpụta ntuziaka ịzụta ihe a na akụkụ ndị anyị kwesịrị iburu n'uche na gam akporo mgbe ị na-ahọrọ ekwentị ọhụrụ.
Esi emeghachi omume na ọkwa sitere na mkpọchi ihuenyo
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzaghachi ozugbo na ọkwa ahụ mana ị maghị etu esi eme ya, n’isiokwu a anyị na-egosi gị usoro ị ga - agbaso iji mezuo ya.
Otu esi ejikwa ọrụ nke ọkwa site na mkpọchi mkpọchi
Ma Ọkwa bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma dị na ntanetị. Ọ bụ eziokwu na…